भारत र चीनमध्ये कसको क्षेप्यास्त्र पावरफुल ? अमेरिका समेत डरायो — Imandarmedia.com
भारत र चीनमध्ये कसको क्षेप्यास्त्र पावरफुल ? अमेरिका समेत डरायो
एजेन्सी। भारतले केही दिनअघि अग्नि–५ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि चीनले लगातार प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले भारतको क्षेप्यास्त्र परीक्षणका विषयमा केही दिनयता लेखिरहेको छ।
कतिपय समाचारमा चीनको विनाशकारी क्षेप्यास्त्र र त्यसको दायराका विषयमा चर्चा गरिएको छ। भारतको अग्नि–५ क्षेप्यास्त्रको दायरा पाँच हजार किलोमिटर छ। यसले आणविक र परम्परागत दुवैथरी हतियार बोक्न सक्छ।
उता चीनको डीएफ–१७ क्षेप्यास्त्रको दायरा १२ हजारदेखि १५ हजार किलोमिटरसम्म छ। यसलाई बेइजिङबाट प्रहार गरिएछ भने पनि भारतको जुनसुकै ठाउँमा आक्रमण गर्न सकिन्छ।
डोङफेङ–४१ चौथो पुस्ताको सोलिड फ्युलबाट चल्ने अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र हो। यस क्षेप्यास्त्रको सञ्चालन चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको रकेट फोर्सले गर्ने गरेको छ।
२१ मिटर लामो र २।२५ मिटर गोलाइ भएको क्षेप्यास्त्रलाई ट्रक माउन्टेड लोन्चरमार्फत जहाँ पनि लग्न सकिन्छ। यसको गति प्रतिघन्टा ३० हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ ।
चीनको डोङफङ३१ क्षेप्यास्त्रको दायरा सातदेखि आठ हजार किलोमिटर छ। यसले पनि आणविक आक्रमण गर्न सक्छ। तेस्रो पुस्ताको यो क्षेप्यास्त्रले १ मेगाटन थर्मोन्युक्लीयर हतियार लैजान सक्छ।
यसको अधिकतम गति आठ किलोमिटर प्रतिसेकेन्ड छ। यसलाई मिसाइल साइला र ट्रक माउन्टेड प्लेटफर्मबाट लोन्च गर्न सकिन्छ। यसको लम्बाइ १३ मिटर र तौल ४२ टन जति छ।
अमेरिकालाई समेत चीनको डीएफ–१७ हाइपरसोनिक मिसाइलबाट खतरा रहेको बताइन्छ। त्यसैले गर्दा अमेरिकाले मिसाइल डिफेन्स टेक्नोलोजी अप्ग्रेड गर्ने कोशिश गरिरहेको छ।
यस हाइपरसोनिक मिसाइलले लामो दूरीसम्म सटीक निशाना लगाउन सक्छ। यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले ग्वाम वा जापानमा रहेको अड्डाको सुरक्षाको लागि बलियो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
तेस्तै , अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका एक बरिष्ठ अधिकारीले चीनले जसरी गुपचुप तरिकाले हाइपरसोनिक मिसाइलको परीक्षण गरेको छ त्यो रुसको स्पुतनिक लञ्च जस्तो भएको बताएका छन् । १९५७ मा रुसले स्पुतनिक स्याटेलाइन लञ्च गरेको थियो ।
त्यसपछि शीतयुद्धमा अमेरिका र रुसबीच हतियारको रेस सुरु भएको थियो । अमेरिकी सेनाको ज्वाइन्ट चीफ अफ स्टाफका प्रमुख मार्क मिलीले यी कुरा ब्लुमबर्ग न्यूजलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा बताएका हुन्।
उनले चिनियाँ सेनामा तीब्र रुपमा विकास भइरहेको बताएका छन् । मार्क मिलीले भने ‘हेमिले देख्यौं कि चीनले धेरै महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हतियारको परीक्षण गर्यो र ठूलो चिन्ताको विषय यो हो कि यो स्पुतनिकको घटनाजस्तै छ जसले हाम्रो पूरै ध्यान आफूतर्फ तानेको छ ।
अमेरिकी पक्षले चीनको हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणको बारेमा केही बोलेको यो पहिलो पटक हो । पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले भने जनरल मिलीको टिप्पणीमा कुही टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
उनले भने ‘यो कुनै यस्तो प्रविधि होइन जसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन ।’ किर्बीले अमेरिका आफ्नो सुरक्षा तन्त्र र हाइपरसोनिक प्रविधिमा काम गरिरहेको बताए ।
बेलायती अखबार फाइनान्सियल टाइम्सले केही समय पहिले एक समाचार प्रकाशित गर्दै चीनले अगष्ट महिनामा नै अन्तरिक्षबाट हाइपरसोनिक मिसाइलको गुपचुप परीक्षण गरेको खुलासा गरेको थियो ।
यो खबरले अमेरिकासहित विश्वका कैयौं देश चकित परेका थिए । यद्यपि चीनले यो कुरा अस्वीकार गरेको थियो र उसले यो कुनै मिसाइल परीक्षण नभइ अन्तरिक्षयानको परीक्षण भएको बताएको थियो ।
चीनको हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणको तुलना रुसको स्पुतनिक परीक्षणसँग यसकारण गरिँदैछ किनकि शीतयुद्धको क्रममा १९५७ मा रुसले स्पुतनिक स्याटेलाइन लञ्च गरेर अमेरिकाको मनमा यो डर उत्पन्न गरिदिएको थियो कि
ऊ प्राविधिक रुपमा धेरै उन्नत भएको छ । यसको तत्कालै पनि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकाले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने घोषणा गरेका थिए ।